Soomaaliya oo war cad kasoo saartay khilaafka u dhaxeeya dowladaha khaliijka – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Soomaaliya oo war cad kasoo saartay khilaafka u dhaxeeya dowladaha khaliijka
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeeysay ka hadashay khilaafka diblomaasiyadeed ee dhawaan soo kala dhex-galay qaar ka mid ah Dowladaha Carabta iyo Qadar.
War-saxaafadeed deg-deg ah oo goordhaw kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si aad uga xun tahay, kana ka walaacsan tahay khilaafkaas diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dowladahaas.
Qoraalka dowladda oo u muuqda mid ay ku caddeeynayso inaysan dhinac la safnayn ayay ugu baaqday dowladaha carabta ah ee khilaafka diblomaasiyadeed soo kala dhex-galay in khilaafkooda ay ku dhammeeyaan wadahadal iyo is faham, iyadoo la adeegsanayo ururka Jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka.
Dalalka Masar, Sucuudiga, Baxreyn iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhawaan shaaciyay inay gebi-ahaan xiriirka diblomaasiyadeed u jareen dowladda Qadar, kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto ururo argagaxiso ah.
War-saxaafadeedka dowladda Soomaaliya ayaa u qoran sida hoose ku xusan:-